Tower-ka Dabeylaha: Taallada Hawada | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 04/05/2021 10:08 | Ciencia
Aadanaha wuxuu had iyo jeer xiiseeyaa inuu ogaado dhammaan doorsoomayaasha saameeya cimilada iyo saadaasha hawada aag. Dabaysha ayaa ka mid ahayd doorsoomayaasha saadaasha hawada ee kicisay xiisaha ugu badan maadaama aan si wanaagsan loo qiyaasi karin isla markaana aan lagu arki karin isha qaawan. Iyada oo ku saleysan doorsoomahan, in ka badan laba sano markii la dhisay, wali wey taagan tahay. Waxay ku saabsan tahay munaaradda dabaysha. Waxay ku taalaa xaafada Plaka ee magaalada Athens una dhow Roman Agora iyo cagteeda Acropolis. Waa dhismihii ugu horreeyay taariikhda oo dhan oo si gaar ah loogu talagalay in lagu qabto howlaha sahaminta saadaasha hawada.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno dhammaan taariikhda, astaamaha iyo muhiimadda ay leedahay munaaradda dabaysha.
2 Asalka munaaradda dabaysha
3 Qaab dhismeedka munaaradda dabaysha
4 Adeegsiga kale
Waxaa sidoo kale loo yaqaan Horologion ama Aérides, waxaa dhistay naqshadeeyaha iyo cirbixiyeenka Andrónico de Cirro qarnigii XNUMXaad ee dhalashadii Ciise ka hor. C., waxaa wakiishay naqshadeeyaha dhismaha Vitrubio iyo siyaasiga reer Romanka ee Marco Terencio Varrón. Waxay leedahay qorshe sideed geesood ah waxayna leedahay dhexroor ah 7 mitir iyo dherer ku dhow 13 mitir. Waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee dhismahani leeyahay oo ka dhiga mid aan caadi ahayn. Waana inay tahay qaab-dhismeed adeegay dhawr adeegsi. Dhinac, waxay ahayd macbud loo hibeeyay Aeolus, oo ahaa Aabbaha dabaysha ee quraafaadka Giriigga, sidaas darteed wuxuu uga adeegi jiray dhinaca diinta. Dhinaca kale, waxay u ahayd kormeere isbeddelkan saadaasha hawada, sidaa darteed sidoo kale wuxuu lahaa shaqadiisa cilmiyaysan.
Mid kasta oo ka mid ah dabeylihii ka jiray Giriiggii hore waxaa loo aqoonsaday inuu yahay ilaah dhammaantoodna waxay ahaayeen wiilashii Aeolus. Giriiggii hore waxay muhiim u ahayd in la ogaado astaamaha iyo asalka dabaysha. Waxay doonayeen inay ogaadaan halka dabayshu ka timid maaddaama ay ahayd magaalo ganacsi oo ku shiraacda badda Mediterranean iyada oo shiraacaysa. Guusha iyo guuldarrada dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxay inta badan ku tiirsaneyd dabaysha. Waa wax caadi ah in doonyaha shiraaca leh dabayshu ama ay door muhiim ah ka ciyaari doonto daabulidda alaabta. Kuwaas oo dhammi waxay ahaayeen sababo ku filan oo lagu doonayo in lagu barto wax kasta oo ku saabsan dabaylaha si qoto dheer. Waa halka ay ka timaaddo muhiimada munaaradda dabayshu.
Xaqiiqda ah in munaaradda dabaysha laga xushay dhinaca Roman Agora (fagaaraha suuqa) kama ahayn shil. Ganacsatadu waxay lahaayeen ilo macluumaad oo waxtar u leh danahooda waxayna isweydaarsi wanaagsan sameyn karaan.
Asalka munaaradda dabaysha
Sidaan soo aragnay, dabayshu waxay kamid ahayd kuwa ugu badan ee la doonayo isbeddelada saadaasha hawada si loo ogaado waqtigaas. Ganacsatadu waxay lahaan karaan ilo macluumaad oo aad waxtar ugu leh danahooda gaarka ah. Waxay kuxirantahay jihada dabayshu u socoto, waxaa suurta gashay in la qiyaaso dib u dhaca ama horay u socodka maraakiibta qaar ee dekedda. Wuxuu sidoo kale ogaan karay qiyaas ahaan inta ay qaadaneyso in alaabtiisa ay gaarto meelo kale.
Si loo ogaado in safarada qaarkood faa'iido leeyihiin, waxaa la isticmaalay doorsoomaha dabaysha. Haddii aad u baahan tahay inaad safarrada qaarkood ku gasho xawaare iyo deg deg badan, waxaad si ka fiican u qorsheyn kartaa hal wado ama mid kale iyadoo kuxiran xoogga iyo nooca dabaysha dhacaysa.
Qaab dhismeedka munaaradda dabaysha
Qaybta ugu daran ee munaaradda dabayshu waa qaybteeda ugu sarraysa. Mid kasta oo ka mid ah 8 waji ee munaaraddu waxay ku dhammaataa jajab leh bas-gargaar dhererkiisu ka yar yahay 3 mitir. Halkan dabaysha ayaa wakiil ka ah mid walbana waxaad moodaa inuu yahay midka ka duulaya meesha uu ku wajahan yahay. 8-da dabayl ee uu xushay Andrónico de Cirro waxay ku soo beegmayaan inta badan kuwa ka soo horjeedka Aristotle ayaa kacay. Aan aragno waa maxay dabaylaha laga heli karo munaaradda dabaysha: Bóreas (N), Kaikias (NE), Céfiro (E), Euro (SE), Notos (S), Dibnaha ama Libis (SO), Apeliotes (O) iyo Skiron (MAYA).
Saqafka sare ee qaabdhismeedka qaabdhismeedka asal ahaan wuxuu ka yimid munaaradda oo waxaa taaj u yeelay muuqaal ah naxaas wareegaya Triton God. Jaantuskan 'Triton God' wuxuu u shaqeynayay sidii hawo cimilo ah. Qalabka hawada ayaa loo isticmaalaa in lagu ogaado jihada dabaysha. Gacantiisa midig wuxuu ku qaatay ul tilmaamaysa jihada ay dabayshu ka dhacayso iyo waxay u sameysay si la mid ah waxa ay qabato boodhadh hawleedka caadiga ah. Si loo dhammaystiro macluumaadka dabaysha laga helay goobta kormeerka, waxaa jiray afar meelood oo qoraxdu ka kooban tahay oo ku yaal wajiyada ka hooseeya friisaska. Raggaas afarta ah waxay lahaayeen daciifnimo aragtiyeed waxayna noo oggolaadeen inaan ogaano waqtiga maalinta ay dabayshu dhacayso. Sidan ayay si fiican u ogaan karaan markii daruuraha ay qariyaan qorraxda iyo waqtiga iyada oo loo marayo saacadda haydiga.
Sababtoo ah taallodan weli xaaladdeeda way wanaagsan tahay, waxaa lagu abaalmariyay inay baarto oo wax u barato si raaxo leh oo faahfaahsan. Shaki la'aan waa mid ka mid ah taariikhihii ugu da'da weynaa ee cilmiga lagu yaqaan. Ujeeddooyinka ugu muhiimsan ee munaaraddani waxay ahaayeen dhowr. Waxay u adeegeen inay cabiraan waqtiga socda dhaqdhaqaaqa qorraxda iyo xilliyeed ee qorraxda mahadnaq afarta meelood ee ku xardhan 8-da dhinac. Dhinacyadan waxaa lagu dhisay marmar Pantelic ah. Gudaha waxaa ku jiray saacad biyo ah oo ay weli harsan tahay waxaadna arki kartaa tuubooyinkii horseedka ka ahaa biyaha ka imanaya ilaha dhaadheer ee Acropolis iyo kuwa u adeegay inay siiyaan meel ka baxsan inta ka badan.
Waxay ahayd saacadda saacadda oo tilmaamaysa saacadaha maalinta markay daruurtu jirto iyo habeenka. Saqafku wuxuu sameeyaa nooc ka mid ah caasimada haramka dhagxaanta dhagxaanta leh kala-goysyada shucaaca leh ee dusha ka daboolan. Horeyba waxay ugujirtay bartamaha meesha cimilada hawada ee qaab newt ama ilaah kale ee ilaah bada.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto munaaradda dabaysha iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Munaaradda dabaysha
Sanadka bilaa xagaaga